Suuqgeynta Isticmaalayaasha Smartwatch: Cilmi baaris Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato | Martech Zone
Suuqgeynta Isticmaalayaasha Smartwatch: Cilmi baaris Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Arbacada, February 3, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Kahor intaadan aqrin qoraalkan, waa inaad ogaataa laba waxyaalood oo aniga igu saabsan. Waan jeclahay saacadaha waxaanan ahay taageere Apple ah. Nasiib darrose, dhadhankeyga saacadaha ayaan u dhigmin qiimaha astaamaha shaqooyinka farshaxanka ee aan jeclaan lahaa inaan ku yeesho curcurka - marka Apple Watch wuxuu ahaa mid waajib ah. Waxaan u maleynayaa inaanan ahayn qofka kaliya ee sidaas u fikiraya, in kastoo. Sida laga soo xigtay NetBase, ka Apple Watch ayaa garaacday Rolex ku xusan bulshada.
Rajo weyn kama qabin in Apple Watch wax ka badali doono shaqadeyda ama nolosheyda shaqsiyadeed, laakiin waan la dhacay saameynta ay ku yeelatay. In kasta oo asxaabteyda badankood ay ku xiran yihiin taleefannadooda casriga ah, haddana waxaan u muuqdaa inaan taleefankayga uga tago meel u dhow oo aan iska iloobo maalintaas oo dhan. Waxaan kala shaandheeyay oo keliya codsiyada aan doonayo inaan ku soo ogeysiiyo saacadda. Natiijo ahaan, kama gaarayo taleefankayga oo waxaan ku luminayaa dhoobada ogeysiisyada app saacadda soo socota. Taas oo kaliya ayaa ka dhigtay maalgashi qiimo leh wax soo saarkayga.
Sahanka Smartwatch ee Kentico waa qeybtii 10-aad ee taxanaheeda cilmi baarista Kentico Digital Experience ee socda. In kasta oo iibin liidata, ku dhowaad 60% jawaab bixiyayaashu ay jeclaan lahaayeen inay ugu dambayn yeeshaan smartwatch; iyo 36% ayaa qorsheynaya inay sidaas sameeyaan sanadka soo socda gudihiisa.
Soodejiso Kentico's Smartwatch Research
Smartwatches waxay u taagan tahay fursad gaar ah oo ay ku wadi karaan barnaamijyada dhinac saddexaad. Marka inta qalab sameeyaashu ay ku dadaalayaan inay u abuuraan kiisas adeegsi oo kalifaya smartwatch, magacyada iyo suuqleyda waa inay sidoo kale il gaar ah ku hayaan shaashadda yar.
Saddex meelood meel ka mid ah jawaab bixiyayaashu waxay jeclaadeen fikradda helitaanka jihooyinka, raadinta cuntada iyo jir dhiska, raadinta cod-kicinta, iyo digniinta-waqtiga dhabta ah ee diyaaradda, bangiga ama shabakadda bulshada iyada oo loo marayo smartwatch. Khariidadaha Apple iyo isdhexgalka runti aad ayey u fiican yihiin… halkan waxaan rajeyneynaa in tayada khariidadaha ay sii fiicnaanayaan!
Isticmaalayaasha Smartwatch Dheeraad ah:
71% macaamiisha waxay ku fiicnaan doonaan xayeysiinta xulashada ee lagu bixiyo smartwatch
70% macaamiisha ayaa rumeysan inay u isticmaali doonaan smartwatch adeegsiga shaqsiga kaliya
Inta badan jawaab bixiyayaashu waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin fikirka helitaanka emayl iyo qoraallo ku saabsan smartwatch-kooda.
Waa kuwan sawir-gacmeed weyn oo jebiya qaar ka mid ah natiijooyinka:
Ku saabsan Kentico
Kentico waa hal-hal-CMS, E-commerce, iyo Suuqgeynta Suuq-geynta ee kaxeysa natiijooyinka ganacsiga ee shirkadaha leh nooc kasta ha ahaadee goobta ama daruuraha. Waxay siisaa macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha awood badan, qalab dhameystiran iyo xalalka macaamiisha udub dhexaad u ah si loo abuuro degello internet oo qurux badan leh laguna maareeyo khibradaha macaamiisha si fudud jawi ganacsi oo firfircoon. Xulka xulashada hodanka ah ee Kentico Web Content Management Solution ee qaybaha websaydhka ka baxsan, khaas ahaanshaha fudud, iyo furan API si dhakhso leh ayuu u hawlgeliyaa websaydhadu. Markii lagu daro xalka buuxa ee xalalka isku dhafan, oo ay ku jiraan Suuqgeynta Onlineka, E-commerce, Bulshooyinka Onlineka, iyo Intranet iyo Wadashaqeynta, Kentico waxay si buuxda u hagaajineysaa khibrada macaamiisha dhijitaalka ah ee ku teedsan kanaallo badan.
Tags: watch applekenticosamsung daawosmartwatchkorsashada smartwatchdaawato
Laga soo bilaabo La-shaqsiyeynta illaa Qeexitaanka Sirdoonka Caadiga ah